Obere ụgbọelu dara n'ime ụlọ nke agbataobi: 2 nwụrụ anwụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Obere ụgbọelu dara n'ime ụlọ nke agbataobi: 2 nwụrụ anwụ
Aviation • Na-agbasa News Travel • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Otu obere ụgbọelu dara na Santee, obodo dị na San Diego County, California, n'ehihie a, Mọnde, Ọktoba 11, 2021. Ọ dịkarịa ala, amaara mmadụ abụọ nwụrụ.
Ụgbọ elu Cessna 340A dara n'ụlọ abụọ n'ime ime obodo na -egbu mmadụ abụọ nọ n'ụgbọ ahụ.
Ndị na -aza ajụjụ nke mbụ na -anwa ime ka obi sie onye ọ bụla nwụrụ na ụlọ ndị a dabara. A kpọgara mmadụ abụọ bi n'ụlọ ọgwụ mgbe ha gbanarịrị n'otu n'ime ụlọ.
Ndị Red Cross edobela ebe mgbapụ nwa oge.
The ụgbọelu dara banye n'ime ụlọ 2 n'akụkụ nkuku okporo ụzọ Jeremy na Greencastle n'ihe dị ka elekere 12:15 nke mgbede Ụgbọ elu ahụ bụ Cessna 340A na atụmatụ ụgbọ elu ya sitere na Yuma, Arizona, ruo Montgomery Gibbs Executive Airport na Kearny Mesa, dịka onye na -ekwuchitere County San Diego kwuru.
Ndị ikike kwuru na ha amatabeghị mmadụ ole nọ n'ụgbọ elu a, mana na ha kwenyere na mmerụ ahụ bụ "a na-apụghị ịlanarị." Ndị na -aza ajụjụ mbụ na -arụ ọrụ iji gosi na ndị nọ n'ime ụlọ emetụtara nwere ike ịpụ n'udo.
Na vidiyo nke SkyFOX, enwere ike ịhụ igwe ọkụ ka ha na -eme ka ụlọ 2 mebiri na ihe mberede ahụ. Heartland Fire & Rescue kwuru na ụlọ nke atọ mebiri, ndị ọrụ ihe egwu na -aga ebe ahụ. Ọ dị ka a kụrụ otu gwongworo igbe.
Otu nwoke nọ ebe ahụ gwara FOX 5 na onye agbata obi ya kpọrọ ya na -ekwu na e bugara mama ya na nna ya n'ụlọ ọgwụ. “Amaghị oke mmerụ ahụ ha. Amaara m site n'ịgwa ụfọdụ ndị agbata obi m na ọ bụ ntụpọ na ọnya. Echere m na ha nwere ihu ọma na ha nọ n'azụ ụlọ mgbe ọ mere n'ihi na ọ bịara n'ihu. Michael, onye agbata obi ya, wepụtara mama m na windo azụ na nna nkuchi m nọ n'azụ ụlọ ya mere ha mebiri ogige iji wepụta ya. ”
Ọ dị naanị ihe mgbochi abụọ n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke ihe mberede ahụ bụ Santana High School, ebe ụmụ akwụkwọ niile nọ na nchekwa, dịka edepụtara na Twitter. A na -ahapụ ụmụ akwụkwọ ka ha laa n'ụlọ ma ọ bụ rie nri ehihie, dabere na usoro klaasị Mọnde ha.
Ndị American Red Cross eguzobela ebe mgbapụ nwa oge na Cameron Family YMCA na 10123 Riverwalk Drive na Santee.
A na -enyocha ihe kpatara ụgbọelu ahụ.